OMN: GRD (LIVE) Gurraandhala 3, 2018 – Haala yaaddessaa fayyaa Obbo Baqqalaa Garbaa – Dhimma dantaa Finfinnee – Jeneraalota yakkamoo aangoon badhaafaman OMN: GABAASA ADDAA IJAARSA MANEEN LAMMILEE NAANNOO SOMALEE IRRA BUQAFANIIF IJAARAMAA JIRU ILAALCHISEE [Read More]
Oromo Voice Radio (OVR) Broadcasts- 3 February 2018 SBO Sagalee Bislisummaa Oromo, Gurraandhala 4, 2018
UN says million displaced in Oromia-Somali conflict 3 February 2018 By Dawit Endeshaw (thereporterethiopia) —A new report jointly released by the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), the National Disaster Risk Management Commission [Read More]
Italian man held after driving through city shooting at black people Crispian Balmer ROME (Reuters) – An Italian man opened fire on African migrants in the central city of Macerata on Saturday, injuring six people [Read More]
“Amboo: fincilli xumura garbummaa Cimaan Calqabuuf deemaa Gincii Jalduu Cubii Gindo Gudar, Incinii, Baakkoo, Buraayyuu wajjiin wal-qabee, Baqqalaa Garbaa mana hidhaa Wayyaanee keessaa gadhiifamuu baannaan Qeerroon hundi akka qophaa’u dhaamsa cimaa dabarsanii jiru. Torbaan lamaan [Read More]
Preezdaant Dr. Mulaatuu Tashoomee miseensota raayyaa ittisa biyaaf muudama kennan. Bigaader Jeneraalummaan 40, Meejar Jeneraalummaan 14, Jeneraalummaan 3 fi Leetanaal Jenaraalummaan 4 Preezdaant Dr Mulaatuu Tashoomaan har’a miseensota raayyaa ittisaaf muudama laatan. Birgaadeer Jeneraalummaan kan [Read More]
Barjaa beeksisaa akka sirreessaniif qalama diimaan ”X” iratti godhun gaarii dha.
Barjaa beeksisaa akka sirreessaniif qalama diimaan ”X” iratti godhun gaarii dha. Kan naaf hin gallee garuu, beeksiisni afaan Amaaraatiin Dambidolloofi Beegitti, Nagellee Boranaafi Ciirotti, Ambofi Naqamatetti maalif barraa’ee? Jimmaa, Asallaa, Adaamaatti dhugaadha magaaloonnii kunniin uummata [Read More]